ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္လုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ပ်က္ဆီးေစတဲ့ တညင္းသီး...! - Thadin
HomeHEALTHYေက်ာက္ကပ္ႏွစ္လုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ပ်က္ဆီးေစတဲ့ တညင္းသီး…!
ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္လုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ပ်က္ဆီးေစတဲ့ တညင္းသီး…!
April 23, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္လုံး တစ္ၿပိဳင္နက္ပ်က္ဆီးေစတဲ့ တညင္းသီး…!
တညင္းသီးကို English လို Djenkol Bean လိုေခၚၿပီး၊ သူ႔ရဲ့ Scientific name ကေတာ့ Pithecolobium -lobatum လို႔ဆိုပါတယ္။ တညင္းသီးမွာ လူကိုအက်ိဳးျပဳတဲ့ ဗီတာမင္ဓာတ္ပါဝင္မွု မရွိပါဘူး။ သူ႔မွာ ပါဝင္တာကေတာ့ လူကို ဒုကၡေပး နိုင္တဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ပါ။
တညင္းသီးမွာ Djenkolic acid ဆိုတဲ့ အဆိပ္ေတြ ၀.၃% ကေန ၁.၃% အထိပါဝင္ပါတယ္။
တညင္းသီးေပါတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ေရႊက်င္နဲ႔ သံေတာင္ႀကီးေဒသေတြမွာ တညင္းသီးအဆိပ္သင့္မွု အမ်ားဆုံးေတြ႕ရပါတယ္။ ရာသီမွာ အဆိုးဆုံးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အဆိပ္သင့္မွုေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရွုံးမွုေတြ ရွိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ အဆိပ္သင့္တဲ့အခါ ေဆး႐ုံ တက္ေရာက္ၿပီးစနစ္တက်ကုသမွု မခံယူရင္ေသဆုံးဖို႔ လမ္းပိုမ်ားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
အဲဒီအခါ ဆီးသြားရင္ ေသြးပါတာ၊ ဆီးသြားနည္းတာေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။ ပိုၿပီးဆိုးလာတဲ့ အခါဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ၿပီး ဆီးလုံးဝသြားလို႔ မရျဖစ္လာပါမယ္။
ႏွစ္ခုစလုံးက ဆီးမထြက္နိုင္လို႔ တင္းလာၿပီး မခံမရပ္နိုင္ေအာင္ နာက်င္လာပါမယ္။ ေသြးထဲမွာUrea နဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ေတြမ်ားလာၿပီး ေဆး႐ုံကိုအခ်ိန္မီ တက္ေရာက္ကုသမွု မခံယူရင္ အသက္ေသဆုံးနိုင္ပါတယ္။
တညင်းသီးကို English လို Djenkol Bean လိုခေါ်ပြီး၊ သူ့ရဲ့ Scientific name ကတော့ Pithecolobium -lobatum လို့ဆိုပါတယ်။ တညင်းသီးမှာ လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်ပါဝင်မှု မရှိပါဘူး။ သူ့မှာ ပါဝင်တာကတော့ လူကို ဒုက္ခပေး နိုင်တဲ့ အဆိပ်ဓာတ်ပါ။
တညင်းသီးမှာ Djenkolic acid ဆိုတဲ့ အဆိပ်တွေ ဝ.၃% ကနေ ၁.၃% အထိပါဝင်ပါတယ်။
တညင်းသီးဟာ အဆိပ်သင့်တတ်တဲ့အစားအစာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တညင်းသီးအဆိပ်သင့် တာကို Djenkilism လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ ကျောက်ကပ် နှစ်ခုစလုံးတစ်ပြိုင်နက်ပျက်စီးပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။
တညင်းသီးပေါတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရွှေကျင်နဲ့ သံတောင်ကြီးဒေသတွေမှာ တညင်းသီးအဆိပ်သင့်မှု အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ ရာသီမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် အဆိပ်သင့်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆိပ်သင့်တဲ့အခါ ဆေးရုံ တက်ရောက်ပြီး
စနစ်တကျကုသမှု မခံယူရင်သေဆုံးဖို့ လမ်းပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တညင်းသီးအဆိပ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမော်လီကျုးကတော့ အပ်ချောင်းပုံလေးတွေကို ပုတီးသီသလိုသီထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်ရှည်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွယ်တကူချိတ်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်တွေဝင်လာရင် အသည်းက ပျက်ပြယ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်
ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်က အညစ်အကြေးတွေကို စွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။
အဲဒီအခါ ဆီးသွားရင် သွေးပါတာ၊ ဆီးသွားနည်းတာတွေ ဖြစ်လာပါမယ်။ ပိုပြီးဆိုးလာတဲ့ အခါဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီး ဆီးလုံးဝသွားလို့ မရဖြစ်လာပါမယ်။
နှစ်ခုစလုံးက ဆီးမထွက်နိုင်လို့ တင်းလာပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လာပါမယ်။ သွေးထဲမှာUrea နဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေများလာပြီး ဆေးရုံကိုအချိန်မီ တက်ရောက်ကုသမှု မခံယူရင် အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
​ေလးဘက္​နာ လက္​​ေတြ႔သက္​သာတဲ့ ေရႊထက္တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ေဆးနည္​း​မ်ား…!
လမ္းခဲြၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပန္လည္မဆံုေတြ႔ၾကတာ အေကာင္းဆံုးပါ
This Month : 39177
This Year : 234575
Total Users : 593599
Total views : 2725426